दु:खद खबर – आज फेरि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका १ जनाको मृ’त्यु ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दु:खद खबर – आज फेरि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका १ जनाको मृ’त्यु !
५ असार, गुल्मी । गुल्मीमा होम क्वारेन्टिनमा बसेका एक जनाको मृ’त्यु भएको छ । छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर–५ मैनडाँडा निवासी ६९ वर्षीय पुरुषको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रसिंह खड्काले जानकारी दिए । श’व व्यवस्थापन गर्न नेपाली सेना घ’टना’स्थल पुगेको छ ।
उनी गत जेठ २५ गते भारतबाट आएर होम क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए । प्यारालाइसिसको बि’रामी उनी रहेको भारतमा उप’चार गरेर फर्किएका थिए । बिहीबार आरडीटी टेस्ट गर्दा उनमा एन्टिबडी पोजेटिभ रिपोर्ट आएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक पुण्य पौडेलले बताए । उनलाई भारतबाट नेपाल ल्याएका अर्का एक जनाको आरडिटी रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको थियो ।
गुल्मी जिल्लामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या १०५ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ३ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट जना २ जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ । हालसम्म पीसीआर परीक्षणको लागि ९७६ जनाको स्वाब संकलन गरेर पठाइएकोमा ५४८ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।